नचेतेका प्रदीप ! – Khabar Silo
नचेतेका प्रदीप !
काठमाडौं । प्रदीप खड्कालाई आफ्नो स्टारडम जोगाउन एउटा गतिलो फिल्मको जरुरी छ । लिलीबिली, रोज, लभ स्टेसन कुनै पनि फिल्मले उनको स्टारडम मजबुत गर्न मद्दत गरेनन् ।
लिलीबिली र रोजले त निर्माताको बिचल्ली नै पारेका छन् । पैसा नउठेपछि लिलीबिलीका निर्माता बारम्बार झ्यालखाना नै बसेका छन् भने रोजका निर्माताले बल्लतल्ल कलाकारको पैसा चुक्ता गरेका खबर बाहिर आएका छन् । लभ स्टेसनले त पैसा मात्र होइन, निर्मातासँगै प्रदीपको पनि हुर्मत लिएको थियो । यो फिल्म टर्किस फिल्मको जस्ताको तस्तै नक्कल थियो ।
लभ स्टेसनको चोरी काण्डपछि धेरैले सोचेका थिए, प्रदीप अब सुध्रन्छन् । तर, उनको रिलिज हुन लागेको प्रेमगीत ३ को भर्खरै सार्वजनिक भएको गीत हात्ती ढुंगामाको कम्पोजमात्र होइन कोरियोग्राफि पनि चोरिएको देखिन्छ ।
गीत रजनीकान्त र ऐश्वर्या राय अभिनित तमिल फिल्म इथिरन को किलिमन्जारोबाट चोरिएको छ भने कोरियोग्राफि हैदर र पद्मावतका गीतबाट उडाइएको छ । प्रदीप यसरी चोरीमा रमाएको देखेर दर्शकलाई त शरम लाग्न थालिसक्यो भने उनलाई कहिले लाग्ने हो ? सम्पूर्ण’बाट
खबरहबसँग पूर्वयुवराज पारसले भने– मलाई राजा बन्नु छैन, मोटरसाइकलमा हिँड्दा के को लाज ?
काठमाडौं– मोडल तथा युट्युबर सोनिका रोकायासँगको हिमचिमका कारण चर्चाका आएका पूर्वयुवराज पारस शाहले आफू राजा हुने आशक्तिको मानिस नभएको बताएका छन् । खबरहबसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा पूर्व युवराज पारसले हरेक काम गर्न आफू स्वतन्त्र भएको बताए । रोकायासँग हिमचिम बढेको र उनलाई लिएर मोटरसाइकलमा हुँइकिएको भिडियो बारे पारसले प्रश्न गरे ,‘म राजा हुँ र मोटरसाइकलमा हिँड्दा […]
अमेरिकामा परिवार र सम्पति त्यागेर शारदा रातिको १२ बजे रुदै निस्किए, बाबालाई मन पराए आए भन्दै रुन थालिन अघोर बाबाको श्रीमती (भिडियो)
आजभोलि व्यापक रुपमा चलेका युटुब च्यानलहरुमा मान्छे भाइरल बनाउने एउटा छुट्टै माध्यम बनेका छन् । युटुबका भिडियोहरु हेरिहनुहुन्छ भने एक जना बाबा जि लाई पक्कै देखेको हुनुपर्छ राजधानी उपत्यकाको उत्तरी कुना सुन्दरीजलमा बस्दै आएका यी सन्यासी बाबा आफुलाइ महा मृ त्युन्जय अघोर बाबा भनेर चिनाउछ्न । रोमान्चक तरिकाले प्रश्नको जबाफ दिने भएकाले आजभोलि उनी भाइरल […]
सोनी टिभीको खुलासा : भ्यालेनटाइन्स डेमा आदित्य र नेहाको विवाह हुँदैछ
काठमाडौं, २२ माघ । निकै समय अघिदेखि आदित्य नारायण र नेहा कक्कडको जोडीलाई लिएर विभिन्न चर्चाहरु भइरहेका छन् । इण्डियन आइडल सिजन ११ मा यी दुईको केमेस्ट्रीबारे पनि विशेष कुराकानी हुन्छ । यी दुईले अफ स्क्रिन नभई अन स्क्रिन विवाह गर्ने कुरा पक्कापक्की भएको छ । सोनीले एक भिडियो सेयर गरेको छ जसमा यी दुई […]
साउथ सुपरस्टार एशबारे अनौठा तथ्यहरु